Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): 13 may 2014 ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် အစိုးရနှင့် KIO/A ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ကြွရောက်လာသော KIO/A ကိုယ်စားလှယ်များအားဒေသခံကချင်ပြည်သူလူထုများမှသောင်းသောင်းဖျကြိုဆို။
13 may 2014 ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် အစိုးရနှင့် KIO/A ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ကြွရောက်လာသော KIO/A ကိုယ်စားလှယ်များအားဒေသခံကချင်ပြည်သူလူထုများမှသောင်းသောင်းဖျကြိုဆို။
at 5/12/2014 08:24:00 PM
Supporters of the Kachin Independence Army gather in Myitkyina on Monday ahead of peace talks
KIO DAT KASA HPUNG NI MYITKYINA DU ========================
ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်သော မြန်မာ အစိုးရပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်
ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ နှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရန် အတွက် KIO, မှ ဆရာကြီးဦးဆွမ်လွှတ်ဂမ် ဦးဆောင်သော KIO, ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ သည်
ယနေ့(၁၂.၅.၂၀၁၄)ရက်နေ့ ညနေ (၃)နာရီ အချိန်တွင် ကချင် ပြည်နယ်
မြစ်ကြီးနားမြို့ သို့ ရောက်ရှိ လာကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ရောက်ရှိလာသော KIO, ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ များအား UN မှ Mrs, Mariam
နှင့် PCG မှ တာဝန်ရှိသူများက နမ်ဆန်ယာန် မှ သွားရောက်ကြိုဆို ခဲ့ကြောင်း
လမ်းတလျှောက် ၀ိုင်းမော် နှင့် မြစ်ကြီးနားမှ ဒေသခံ ကချင်လူထုများမှ KIO,
ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အား ကချင်အမျိုးသား အလံ အားဝှေ့ ယမ်းကာ၊
WE LOVE KIO, စသော စာသားများကိုင်ဆောင်ကာ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆို ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။KBC အတွင်းရေးမှူး နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ လည်း လာရောက်ဆုတောင်း ပေးကြောင်းထပ်မံသိရှိရပါသည်။
KIO, ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ သည် မနက် ဖြန် (၂၀၁၄၊မေလ ၊ (၁၃-၁၄ ) ရက်နေ့ တို့ တွင် မြန်မာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် တွေ့ ဆုံ ဆွေး နွေး ကြ မည် ဖြစ် ပြီး၊
မေလ ၊ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် NCCT နှင့် ဆွေးနွေးကာ( မေလ၊ ၁၆)ရက်နေ့ တွင် ကချင်လူထု နှင့် တွေ့ဆုံ ကာ ကချင်လူထု၏ သဘောထားဆန္ဒကို ရယူသွားမည်
ယခုတကြိမ်အစိုးရ ဆွေးဆွေးပွဲမှ အဖြူ၊ အမဲ အဖြေတခု သိသင့် ပြီဖြစ်ကြောင်းဟု
ဒေသခံ ကချင်လူထုအတိုင်းအ၀ိုင်းကြားတွင် ပြောဆိုနေကြ ကြောင်း မြစ်ကြီးနား
ဒေသခံများထံ မှ သတင်းရရှိပါသည်။
Myen asuya hte bawngban na matu Sara Kaba Sumlut Gam woi awn ai KIO Dat Kasa Hpung ni gaw daini 3:00 Pm ten hta Myitkyina mare de du shang wa sai lam chye lu ai.
Du sa wa ai Dat Kasa Hpung ni hpe UN kaw na Mrs, Mariam hte PCG salang ni Nam San Yang kaw nna sa tau la ma ai lam, Myitkyina hte Waimaw Ginra na Wunpawng sha ni hku nna mung wu wu di di hkap tau la ma ai lam, KBC Ningbaw, Amu madu hte magam gun ni hku nna mung hkap hkalum akyu hpyi ya ma ai lam, chye lu ai.
Matut nna May 13-14 ya laman Myen hte bawngban, 15 ya shani NCCT hte bawngban nna 16 ya shani gaw Wunpawng mung shawa hte hkrumzup ai lamang nga na re lam chye lu ai.
Mung mare masha niansen gaw “Ndai lang na zuphpawng hta hpraw ai chyang ai chye ra sai lam, chying hkraw galu yang sum machyi wa na re lam, nmai byin ai re hpe chye ninglen n shakut ra ai lam” ni tsun garu nga ma ai hpe na chye lu ga ai. (by-KBC MNK)
Photo by Kachin Facebook and friends
Labels: KIA/KIO, Mung masa, News, photo